Lixesha leholide kwakhona, Nazi iindlela ezili-10 zokunyusa iziphumo zakho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 11, 2017 NgoLwesithathu, Oktobha 11, 2017 Douglas Karr
Ndihleli kwivenkilana kwisikhululo senqwelomoya saseMinneapolis esibuyela ekhaya eIndianapolis. Ndigqibile ukwenza intetho ephambili ku IngqondoOne eneenkcukacha ezichazayo Uhambo lwe-Agile yokuThengisa kwaye ndinike abazimasa ngeyam Iphepha lokusebenzela eliQalayo. Thatha ikopi yayo njengoko ufunda le infographic- kufanele kukunceda!
Buyela ebalini. Bendise-Austin eDell kwiveki ephelileyo ndibonisa amaqela abo aphesheya malunga ne-podcasting, ndagoduka, ndemka ndaya eMzantsi Dakota kwiintsuku ezimbalwa emva koko. Ndonga isithende esityumkileyo ke konke ukuhamba kuyandicima nam. Ngayo yonke into eqhubekayo, ndaya eMzantsi Dakota apho uKorena Keys omangalisayo khona Izisombululo eziphambili zeMedia usiqhubele ngeenxa zonke kwiBlack Hills isibonisa iindawo ezintle. Inqaku elisecaleni- le isenokuba yeyona ndawo intle yokuya e-United States ndakhe ndaya kuyo, kwaye bendihleli kwilizwe liphela.
Njengoko sasiqhubela ezintabeni ukuya kunambitha iwayini, yaqala ukukhithika. Hayi i-flake apha okanye phaya… ibisihla nyani. Yayintle kakhulu… kodwa inye kuphela ingxaki.
Bendixakekile ndipakisha kwaye ndilibele ukuza nejezi okanye idyasi! Andiqinisekanga ukuba bendicinga ntoni. Ngubani oya ezintabeni ngo-Okthobha engakhange apakishe nebhatyi? (Mna!)
Inqaku lam? Ixesha libaleka, kwaye sele ilixesha lokuba uqale ucwangcise iinzame zakho zokuthengisa ngeholide. Le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG sisixhobo esikhulu, Iindlela ezili-10 ezibalulekileyo zokuThengisa iiholide ngo-2017.
Ukuthengisa okunxulumene neeholide eMelika kulindeleke ukuba kudlule kwi-923 yezigidigidi kwi-2017, inyuke nge-3% ukusuka kwisizini ephelileyo. Eli nani linokwenza imibono yomdaniso wenzuzo entlokweni yakho, kodwa ikwabonisa umceli mngeni omkhulu: inkcitho engaphezulu ithetha ukhuphiswano ngakumbi-kunye nomyalezo wokuthengisa omninzi wabathengi ukuze bahlele. Intengiso ye-MDG
Iindlela ezili-10 ezibalulekileyo zokuThengisa iiholide ngo-2017
Qala kusasa kunye nesiphelo Ngexesha elide
Ukubonelela Ukuphefumlelwa Ngaphesheya kwamajelo
Gxi ninisa Imidiya yokuncokola Ukufikelela kuBasebenzisi abaNcinci
Cacisa Malunga neholide
Yenza Umyalezo wakho
Nikela okungaphezulu koko ngezaphulelo
Yenza iMfono Ujoliso olukhulu
Gcina iso Amazon
enza zokubuyisa Kulula kakhulu
Nantsi i-infographic epheleleyo enezinye izibalo ezixhasayo kunye neenkcukacha:
tags: AmazonurhweboizaphuleloeCommerceiholideamaqhinga okuthengisa ngeholidezorhweboIntengiso ye-msgNgokwezifisoimbuyekezoImidiya yokuncokola
Okt 17, 2017 ngexesha 2:50 AM
Enkosi ngesabelo uDouglas!
Ngaba unokusebenzisa amanye ala maqhinga ngexesha "langaphandle kwexesha"?
Okt 27, 2017 ngexesha 9:21 AM
Ngokuqinisekileyo, Filip! Ndicinga ukuba imiyalezo ebhalwe igama lomntu kunye nengcaciso ethile ibonakalisiwe ukuba ifumana ukuvulwa okuphezulu, ukucofa, kunye namaqondo okuguqula. Kwaye, uququzelelo lwe-omni-channel luhlala ludibanisa. Enkosi kakhulu ngokuphawula!